किन कार्यान्वयन भएन स्प्रेडको गणनाविधि ?: अञ्जन श्रेष्ठको बिचार – Clickmandu
किन कार्यान्वयन भएन स्प्रेडको गणनाविधि ?: अञ्जन श्रेष्ठको बिचार
अञ्जन श्रेष्ठ २०७६ असार २२ गते १२:४३ मा प्रकाशित
बैंकको व्याजदर महंगो भएका कारण व्यवसायीको कस्ट अफ फन्ड महंगो भयो भनेर व्यवसायीहरुले माग राखे । कम्पोनेन्टका आधारमा सुलभता पनि भएन भन्ने आधारमा माग सम्बोधन गरिदिनुपर्छ भन्ने आधारमा व्यवसायीहरुले माग राखेका हुन् ।
हाम्रो व्यवसाय पनि निरन्तर रुपमा अघि बढोस् भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो । व्यवसायीहरुले लबिङ गरेपछि माग सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले प्रतिबद्धता जनायो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) नयाँ गणनाविधि ल्याउँछौ भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गर्यो । र, हामीलाई समस्या समाधान हुन्छ भन्ने थियो । स्प्रेडको गणनाविधि अहिले ड्राफ्ट भएर बसिरहेको छ भन्ने सुनेका छौं । त्यसपछि हामीले यसमा समय समयमा घच्घच्याइरहेका पनि रहेका छौं । यो के कति कारणले नआएको हो हामीले थाहा पाउनु पर्छ ।
तर, हामीलाई विश्वास छ । यो आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि केही आउँछ । उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिका लागि दिएको सुझावमा पनि यो विषय छ ।
विडम्बना के भयो भने हाम्रो देशमा नीति आउन गाह्रो । आइहाल्यो भने स्पष्ट नहुने र निरन्तरता नहुने अवस्था छ । स्प्रेड दरको गणनालाई पनि त्यसै अनुसार लिन सकिन्छ । पहिले माग गर्र्यौ, यति चाहियो भनेर आइहाल्यो भने पनि स्पष्ट नहुने हो कि भन्ने पनि छ ।
व्याज घटाउनका लागि व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेका होइनन् । माग गरेका हुन् । डेलिगेसन नै गएर माग गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । सडकमा मात्रै गएर माग पूरा हुने होइन भन्ने आधारमा हामीले लविङलाई संगठितरुपमा अगाडि बढाएका हौं । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लविङ गरेका हौं । हामी अब पनि बुलन्द आवाज उठाउँछौं ।
गणनाविधिले ब्याजदर यति सस्तो पर्छ भन्ने भन्दा पनि विशेषज्ञ हिसाबले बाहिरको अनुभव लिएर गर्ने हो । हामीले दर घट्नु पर्छ मात्रै भनेका छैनौं । तर हामीले खोजेको ब्याज बढ्दै जाने, समय समयमा धेरै परिवर्तन हुने अवस्थालाई परिवर्तन गर्न खोजेका हौं ।
त्यसो गर्दै जाँदा नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । यो गणनाविधिलाई बढ्दो क्रम र घट्दो क्रमलाई सही दिशामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो ।
ब्याज त एकल अंकमा राख्नुपर्छ । नेपालको भूराजनीतिले गर्दा खेरी हाम्रो प्रतिस्पर्धा कम छ । लेवरको कुरामा, भौतिक पूर्वाधारको कुरामा, पूँजीको कुराको अवस्थालाई हेर्दा एकल अंकमा राख्दा राम्रो हुन्छ र सजिलो हुन्छ भनेका हौं ।
स्प्रेड दर पनि ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्छ भन्नेमा पनि के तर्क हो भने हिँजो १ अर्बको बैंक हुँदा आज ८ अर्बको बैंक भएको छ । आजको अवस्थामा बैंकको व्यवसाय त बढेको छ । हिँजो र आजको दिनमा त व्यापार बढेको छ । यसै आधारमा स्प्रेड दर घटाउन भनेको हो ।
स्प्रेड दर ३ प्रतिशत पनि धेरै भयो भन्ने लाग्छ मलाई त । २ प्रतिशतभन्दा माथि जान हुन्न भनेको हो । नीति आएको ४ महिनाभन्दा बढीसम्म आएको छैन । सरकारी काम ढिला हुने परम्परा त छँदै छ, त्यसैको परिणाम आजको अवस्था हो भन्ने लाग्छ ।
अब मौद्रिक नीतिमा कसरी आउँछ त्यसपछि मात्रै थाहा हुने भयो । अब हामीले गर्ने भनेको लविङ मात्रै हो । लविङलाई आन्दोलन भन्न मिल्दैन । व्यवसाय गर्नका लागि सहज होस् भन्ने हिसाबले माग गर्ने नै हो ।
अब कर तिर्न मोबाइल एपबाट सकिने, विभागले ल्यायो एप
सिमेन्ट उद्योगीलाई बैंकले ऋण पत्याउन छाडे, स्वीकृत भएको ऋण पनि रद्द गरियो
राजस्व लक्ष्यको ग्याप ७४ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो, आन्तरिक भ्याटमा लक्ष्यभन्दा बढी संकलन
व्यवसाय विस्तारमा आक्रमक बन्यो ब्रिटिस कलेज, ७५ करोडमा किन्यो पुरानो ह्वाइट हाउस कलेज
विकास निर्माणमा बढी मुआब्जा माग्नेसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट, सरकारबाट लाभ लिने प्रवृति हाबी